Indlu yakho embindini ka-Av Paulista e-671
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguAna Claudia Shimofusa
Silusapho esithanda ukulufumana!!
Indlu yethu ihlaziywe ngokupheleleyo kwaye intsha kraca!! Iyilwe luyilo ukuze ube namava amnandi.
Ifakwe kwiposikhadi yaseSão Paulo, kwi-Avenida Paulista ngokwayo, i-50m ukusuka kwi-subway yase-Brigadeiro kwaye ikufuphi nodederhu lweevenkile, iimyuziyam, iindawo zokutyela kunye nayo yonke into ukonwabela eyona dolophu.
Unazo zonke izibonelelo: ikhitshi epheleleyo, ibhedi, ibhafu kunye nelinen yetafile, i-conditioner, ishampu kunye nesepha engamanzi.
Indlu iya kuba yeyakho yonke ngexesha lokuhlala kwakho !!! Ngokutshixa nge-elektroniki kunye ne-doorman yeeyure ezingama-24, ungangena ngokukhuselekileyo kwaye uphume nangaliphi na ixesha.
Isitayile sayo luhlobo lwe studio, zonke zikwigumbi elinye, ziyilwe kakuhle kwaye zikhululekile.
Yonke into entsha !!!
IAvenida Paulista yenye yezona ndawo zibalaseleyo zokuhlala eSão Paulo. Ukufikelela ngokulula kwiidolophu ngemetro. Uya kuba nakho ukutyelela iimyuziyam, iindawo zokuthenga, iindawo zokutyela, yonke into ngeenyawo!! Indawo ikhuselekile kwaye umoya wasePaulista wohlukile kwaye uya kuhlala kwaye wonwabe esixekweni :-)
Umbuki zindwendwe ngu- Ana Claudia Shimofusa
Ndifumaneka ngayo nantoni na oyifunayo;)
UAna Claudia Shimofusa yi-Superhost